“Waligeey Ma Maqlin Qof Weydiinaya Guardiola Laakiin Qandaraaskiisa Sannadka Danbe Ayuu Dhacayaa” – Jurgen Klopp Oo Ka Daalay Su’aalaha Warbaahinta – Laacibnet.net
“Waligeey Ma Maqlin Qof Weydiinaya Guardiola Laakiin Qandaraaskiisa Sannadka Danbe Ayuu Dhacayaa” – Jurgen Klopp Oo Ka Daalay Su’aalaha Warbaahinta
Jurgen Klopp ayaa sheegay inuu fasax ka qaadan doono kubada cagta marka uu isaga tago kooxda Liverpool.
Tababaraha Jarmalka ayaa maamulayay kooxda Reds tan iyo sannadkii 2015, wuxuuna soo jeediyay sannadkii la soo dhaafay inuu waqti fasax ah ka qaadan doono shaqadiisa marka uu dhamaado qandaraaskiisa sannadka 2022, laakiin tan iyo markaas wuxuu sii dheereeyay qandaraaskiisa Anfield oo haatan dhacaya 2024.
Klopp ayaa diyaar u ah inuu Liverpool joogo waqti dhaafsiisan qandaraaskiisa haatan laakiin waxa uu sheegay inuusan shaqo kale ku boodi doonin marka uu ka tago Anfield.
Markii la weydiiyay halka uu isku arko inuu joogayo afar sannadood gudaheed, Klopp ayaa ku jawaabay: “Dad badan ayaa i weydiiya su’aashaan. Waligeey ma maqlin qof weydiinaya Pep Guardiola su’aashaan laakiin qandaraaskiisa wuxuu dhacayaa sannadka danbe.
“Afar sanno ayaa iiga hartay qandaraaskeyga taasoo muddo dheer ka ah kubada cagta. Wax badan ayaa dhici kara waqtigaan gudihiisa. Waxaan qiyaasayaa in afar sanno ka dib inaan ka fekeri doono haddii aan cusbooneysiinayo qandaraaska iyo haddii kale.
“Haddii aan cusbooneysiin waayo, waxaan aadayaa fasax. Marka aan ka tago Liverpool shaqo cusub ma qaban doono maalinta ku xigta. Taas waa hubaal. Hal sanno oo fasax ah ayaan qaadan doonaa ka dib Liverpool.”
Guardiola ayaa ku biiray Manchester City sannadkii 2016, waqti dheerna kuma qaadanin inuu qabsado kubada cagta Ingariiska iyadoo kooxdiisa ay labo xilli ciyaareed oo isku xigta ku guuleysatay Premier League sannadihii 2018 iyo 2019.
Tababaraha reer Spain ayaa sannadkii la soo dhaafay saxiixay qandaraas kordhin laakiin qandaraaskiisa waxaa uga harsan haatan sannad kale isagoo u furan inuu mid cusub saxiixo.
Klopp ayaa ka tagay kooxda Bundesliga ka dhisan ee Borussia Dotrtmund si uu shaqo cusub u raadsado ka dib todoba sannadood uu joogay kooxda Jarmalka.
Waqtigiisii Signal Iduna Park, Klopp wuxuu Dortmund ku hogaamiyay labo koob oo horyaalka Bundesliga ah halka uu sidoo kale gaarsiiyay finalka Champions League sannadkii 2013.